चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख शी चिनफिङको नेपाल भ्रमणबारे यतिबेला अनेकौं कोणबाट बहस सिर्जना भएको छ । नेपालले चीनको भूमिकालाई सदैव सकारात्मक ढंगबाट हेर्दै आएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध युगौं पुरानो हो । विगत हेर्दा पनि चीन–नेपाल सम्बन्धको इतिहासमा भृकुटीदेखि अरनिकोसम्मको विशेष योगदान रहेको छ ।
चीन र नेपाल भूधरातलीय रूपमा नजिकको छिमेकी भएतापनि सम्बन्धका हिसाबले अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको जस्तो उतारचढावपूर्ण छैन । चीनको संस्कार, संस्कृति एवं भाषा र लिपिबारे नेपालीहरू अनभिज्ञ नै छन् । परिणामस्वरूप चिनियाँ समाजमा हुने घटनाक्रमबारे नेपालीहरूलाई बुझ्न कठिन छ । परन्तु चीनले अनेकौं कठिनाइ झेल्दै पछिल्लो समयमा गरेको अद्भुत विकासप्रति नेपालीहरूको चासो दिनानुदिन बढ्दैछ ।
चीनले पनि नेपालमा स्थायित्वको विगतदेखि नै आवश्यकता महसूस गरिरहेको थियो । चीनले नेपालको स्थायित्वको आवश्यकता अनुभव गर्नुको प्रमुख विषय तिब्बतको पृथक्तावादी समस्या हो । त्यसकारण चीन सधैं नेपालबाट एक चीनप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहन्छ । नेपाल हुन त एक चीनप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र हो तर नेपालमा संक्रमण लम्बिनु, विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नहुनु लगायतका कारणले अविकसित र कमजोर नेपालले चीनको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने चीनका नीति–निर्माताहरू महसूस गर्छन् ।
राष्ट्रपति शीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै चीनले एसियामा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चाहिरहेकाले हो । एसियाको शक्तिसम्पन्न राष्ट्र चीन अब एसियाभित्रका राष्ट्रहरूमा अर्थ तथा राजनीति दुवै क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेको छ ।
शीको भ्रमणबाट नेपाल सरकारले अहिलेको अवस्थामा भंयकर लाभ लिनमा जोड दिनु भन्दा पनि छिमेकीहरूबीच सुमधुर सम्बन्धको बारेमा ध्यान दिन जरूरी छ । निकै प्रतीक्षा गरिएको चिनियाँ महामहिम राष्ट्रपति शीको भ्रमण अहिलेको समयमा नेपालमा हुनु आफैंमा उपलब्धि हो । राष्ट्रपति शीको भ्रमणमा तातोपानी नाका पूर्ण सञ्चालन, रेल र तेलको बारेमा मूर्त सम्झौता हुन जरूरी देखिन्छ । परन्तु हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि राष्ट्रपति शीको भ्रमणबाट आर्थिक लाभ लिनेबारेमा धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको धनजनको क्षति बेहोरेको नेपालमा चीनको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ । चीनले नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा विगतदेखि वर्तमान समयसम्म उल्लेखनीय काम गरिरहेको छ । अहिले चीनको सहयोगमा निर्माण हुँदै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत थुप्रै परियोजनाहरू सुचारु अवस्थामा काम भइरहेका छन् ।
ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी र रेल्वे कनेक्टिभिटीलाई बीआरआई परियोजनामा जोड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालले राख्दै आएको थियो । नेपालको यस प्रस्तावलाई ‘एनेक्स’मा सूचीकृत गर्न चीन तयार भएसँगै अब यसलाई नेपालको प्रस्ताव मान्य भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यसबाट अब नेपाल औपचारिक एवं ठोस प्रोजेक्टका साथ बीआरआईमा जोडिएको छ । अब नेपाल र चीन एक आपसमा झन् नजिक बनेका छन् ।
सयौं वर्ष रहस्यमा रहेको चीन, राष्ट्रपति शीको उदयपश्चात् विश्व जगतमा आशा, विश्वास र त्रासको सिर्जना भएको छ । वर्तमान चिनियाँ मोडल निर्माण गर्ने डा. सन यात सेन, माओ र देङ श्याओपिङको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । मुख्यतः माओ र देङले अवलम्बन गरेको विचार नै आजको चीनमा शी चिनफिङ विचारधाराको रूपमा मर्ज भएर जन्म भएको छ । शी विचारधाराको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जग माओले गरेको क्रान्तिको निरन्तरताको नयाँ आयाम हो ।
नेपाली कांग्रेस चिनियाँ राष्ट्रपति शीको भ्रमणबाट किञ्चित् तरंगित हुन आवश्यक छैन । कांग्रेसले स्मरण गर्न आवश्यक छ– नेपालमा गान्धी, मन्डेलाका विचारबारे बहस हुँदा कम्युनिस्ट नेताहरूमा कुनै पनि प्रकारको तरंग देखिएको छैन । परन्तु यसपटक शी चिनफिङका विचारबारे नेपालमा बहस हँुदा कांग्रेस अत्तालिएको देखियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै विचारको बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर यतिबेला कांग्रेस नेताहरू अनौठो प्रकारले आत्तिएको देखियो ।
राष्ट्रपति शीको नेपाल भ्रमणले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपुर्ण प्रभाव राख्छ । चीन सरकार र नेपाल सरकार अहिले वैचारिक रूपमा पनि एकै ठाउँमा छन् । चीनको आर्थिक रूप सफल भएको छ । अब चीनको ध्यान एसियाली मुलकहरूको अथाह सम्भावनालाई एकसाथ जोडेर २१औं शताब्दीलाई ‘एसियाली शताब्दी’का रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छ । यस उद्देश्यलाई पूरा गर्न बीआरआईमार्फत सम्बन्ध नयाँ तरिकाले विस्तार गरिरहेको छ । यसका अलावा चीन अन्य क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रलाई उछिनेर एसिया महादेशमा पहिलो शक्ति हुने र आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्ने प्रतिस्पर्धामा छ ।
अहिले चीन र अमेरिकाबीच अर्थ क्षेत्रमा शीतयुद्ध चलिरहेको छ । चीनले गरेको आर्थिक उपलब्धि महशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । तीव्र आर्थिक उन्नतिका कारण वाशिङटन डीसीले बेइजिङलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देख्ने गरेको छ ।
चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न एसियामा अमेरिकाको अगुवाइमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारिएको छ । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गर्न भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालले इन्डो– प्यासिफिकको उद्देश्य कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक स्वार्थ नभएको खण्डमा मात्र सम्बन्धबारे छलफल हुन सक्छ भन्दै आएको छ । यस्तो समयमा शीको भ्रमणको अर्थ विश्व राजनीतिमा ठूलै तरंगयुक्त हुनेछ ।
इन्डो–प्यासिफिकमा सहभागी राष्ट्र भारत नेपाललाई सधैं आफ्नो पोल्टामा राख्ने कोशिश गरिरहेको छ । भारत शीको नेपाल भ्रमण हुने विषयले तरंगित भएको छ । भ्रमणपश्चात् भने भारतसँगै युरोप र अमेरिका समेत तरंगित हुनेछन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले नेपाल गरेको अघोषित नाकाबन्दीपश्चात् नेपालमा भारतको प्रभाव धेरै कम भएको छ । राष्ट्रपति शीको भ्रमणपश्चात् काठमाडौंमा दिल्लीको प्रभाव नगण्य हुनेछ । यस अवस्थामा दिल्लीले प्रयोग गर्ने कार्डले तुरुपको काम गर्ने छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणको भव्य तयारी भएकाे छ ः प्रधानमन्त्री ओली
नेपाल-चीन मैत्री सम्बन्ध : माओदेखि शीसम्म [तस्वीरमा]
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ऊर्जा र उत्साह थपिने विश्वास
चीन र नेपाल असल दाजुभाइ – शी जिनपिङ
संघर्षबाट खारिएका शी : यसरी बने चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति
असोज २४, २०७६ मा प्रकाशित
ने क पाको युवा संगठनमा आवद्ध आचार्य समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।
नेपालको कालापानीमा भारतको नाङ्गो अतिक्रमण
नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा : सरकारले ‘ग्रेटर नेपाल’ फिर्ता गराउने कि ?
नेपाल–चीन समझदारीको एक महिना ः कार्यान्वयन त परको कुरा सम्बन्धित कर्मचारी नै बेखबर ! काठमाडौं – गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन २० वटा समझदारी पत्रमा भयो । असोज २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपत...
नवजात शिशुको दुवै हातमा ६–६ औंला, बढी औंला काटिन् नर्सले, शिशुको मृत्यु
ऐतिहासिक प्रदर्शनपछि दीपकले के भने ?
साइबर अपराधमा ‘इमेल फिसिङ’ : व्यापारिक कारोबारदेखि गोप्य कुराकानीमा निगरानी !
बंगलादेशमा दुई यात्रुवाहक ट्रेन जुधे, १५ जनाको मृत्यु
निराश जनतालाई उत्साहित बनाउन कांग्रेस जित्नुपर्छ : नेता रिजाल